Masjid kuyaala Faransiiska ooweerar laguqaaday+ sawirro | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Masjid kuyaala Faransiiska ooweerar laguqaaday+ sawirro
in Cunsuri ah oo gaari yar watay ayaa weerar waxa ku qaaday askar ilaalo ka heysay Masjid kuyaala magaalada Valence ee Dalka Faransiiska, waxaana xiligaasi masjidka ku sugnaa dad badan oo u yimid in ay ku dukadaan.
Cunsirigan ayaa la sheegay in uu ujeedkiisu ahaa in gaariga uu jiirsiiyo askarta ilaalada ka heysay masjidka iyo qaar kamid ah dadka Muslimiinta ah, waxaana ciidamada oo ka shakiyay ninkan ay ku fureen rasaas sababtay in uu dhaawac culus uu soo gaaro.
Sadax qof uu ku jiro ninkii damacsanaa in askarta iyo masjidka weeraro ayaa ku dhaawcamay dhacdadaasi, waxaana ninkan la sheegay in dhoor mar isku dayay in uu gaariga jiirsiiyo askarta ilaalada ka heysay masjidka.
Dadka dhawaacmay waxaa sidoo kale ku jiray oday Musmim ah oo haleeshay rasaastii lagu ridayay ninkii weerarka damacsanaa,waxaa sidoo kale dhacdadaasi uu dhaawac kasoo gaaray mid kamid ah askartii goobtaasi joogtay.
Muslimiinta kunool Dalka Faransiiska ayaa si kulul u canbaareeyay weerarka uu masjidka ku qaaday ninkan cunsuriga ah, walina si dhab ah looma oga ujeedka uu ninkan u weeraray masjidka iyo ciidamadii ilaalada kahayay.
Dhawaan ayaa Kooxo careesan waxa ay Masjid ku gubeen Jaziirad kutaala Faransiiska, waxaa sidoo kale dadkaasi ay gubeen kitaabo quraan, falalkan ayaana lala xariiiyay muslim naceyb ay ku kacayaan cunsuriiin kunool Faransiiska.